Забур 99 CARS - Nnwom 99 ASCB
1Awurade di ɔhene,
ɔte nʼahennwa so wɔ Kerubim ntam,
ma asase nwoso.
2Awurade a ɔwɔ Sion yɛ kɛseɛ;
wɔama ne so wɔ amanaman nyinaa mu.
3Ma wɔnkamfo wo din a ɛso na ɛyɛ nwanwa no.
4Ɔhene no yɛ kɛseɛ, ɔdɔ atɛntenenee,
wayɛ deɛ ɛyɛ na ɛtene
5Momma Awurade, yɛn Onyankopɔn so
na monsɔre no wɔ ne nan ntiasoɔ anim;
6Na Mose ne Aaron ka nʼasɔfoɔ no ho,
na ɔgyee wɔn so.
7Ɔfiri omununkum dum mu kasa kyerɛɛ wɔn;
wɔdii mmara ne ahyɛdeɛ a ɔmaa wɔn no so.
8Ao Awurade, yɛn Onyankopɔn,
wogyee wɔn so;
woyɛɛ bɔnefakyɛ Onyankopɔn maa Israel,
nanso wɔtwee wɔn aso wɔ wɔn nnebɔne ho.
9Momma Awurade yɛn Onyankopɔn so
na monsɔre no wɔ ne bepɔ kronkron no so,
na Awurade yɛn Onyankopɔn yɛ kronkron.
ASCB : Nnwom 99